नयाँ दैनिक | लेखनाथ न्यौपानेको ‘टाउकाको मूल्य’ कति ? लेखनाथ न्यौपानेको ‘टाउकाको मूल्य’ कति ? – नयाँ दैनिक
लेखनाथ न्यौपानेको ‘टाउकाको मूल्य’ कति ?
माघ २४, काठमाडौँ । भनिन्छ, मानव जीवनको मूल्य हुँदैन । तर राजनीतिमा मूल्य तोक्ने गरिएका कैयन इतिहास छन् । सत्ता पक्षले आफ्ना प्रतिकुल पात्रलाई भौतिक रुपमा सिध्याउने अभियानमा टाउकाको मूल्य तोकिने गरेका हुन् ।
अमेरिकाले ९ वर्षअघि पाकिस्तानका नेता हाफिज सइदको टाउकाको मूल्य एक करोड अमेरिकी डलर घोषणा गरेको थियो । उनलाई मुम्बइ सहरमा शृंखलाबद्ध आक्रमण र उग्रवादी गतिविधिको आरोप लगाइएको थियो ।
भारत सरकारले माओवादीका एक नेताको टाउकाको मूल्य दाउद इब्राहिमको भन्दा १० गुणा बढी तोकेको थियो । भारतीय माओवादी नेता मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपतिको टाउको ल्याउनेलाई भारु २ करोड ५२ लाख अर्थात् ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ इनाम दिने घोषणा गरेको थियो । टाउकाको मूल्य तोकिएका विश्वमा प्रशस्तै उदाहरण छन् ।
नेपालमा पनि सत्तापक्षले टाउकाको मूल्य ३५ हजार रुपैयाँदेखि ५० लाखसम्म तोकेका इतिहास छन् । जनयुद्ध सुरु हुनुपूर्व नै राज्यविरुद्धमा लागेको आरोपमा प्रशासनले अहिलेका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’लाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ मार्ने आदेशसहित टाउकाको मूल्य ३५ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो ।
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको माग राख्दै आन्दोलनमा लागेकै कारण तत्कालीन सरकारले गणेश तिमिल्सिनाको पनि टाउकाको मूल्य तोकेको थियो । हाल राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष समेत रहेका तिमिल्सिनाको टाउकाको मूल्य ५० हजार रुपैयाँ हो ।
वि.स. २०५९ बैशाख १२ गते गृह मन्त्रालयले गोरखापत्रमा एउटा सूचना जारी गरेर तत्कालीन माओवादीका नेताको टाउकाको मूल्य तोकेको थियो । सूचनामा लेखिएको थियो :
आतंककारीका मुख्य नाइकेहरु डा.बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र मोहन वैद्य (किरण) लाई पक्राउ गर्ने वा नियन्त्रणमा जीवित वा मृत रुपमा सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउने व्यक्तिलाई पुरस्कार स्वरुप रु. ५० लाख दिने । यस्तो कार्यका लागि सुराक दिई पक्राउ परेमा सुराक दिनेलाई सो रकमको पचास प्रतिशत उपलब्ध गराउने ।
आतंककारीका नाइकेहरु पोष्टबहादुर बोगटी, नन्दकिशोर पुन, कृष्णबहादुर महरा, सिपी गजुरेल र नीजको स्तरका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्ने वा नियन्त्रणमा लिई जीवितै वा मृत रुपमा सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउने व्यक्तिलाई रु. ५० लाख दिने । यस्तो कार्यका लागि सुराक दिई पक्राउ परेमा सुराक दिनेलाई सो रकमको पचास प्रतिशत उपलब्ध गराउने ।
कथित सेन्ट्रल कमिटिका सदस्यलाई पक्राउ गर्ने वा नियन्त्रणमा लिई जीवितै वा मृत रुपमा सुरक्षाकर्मीलाई बुझाउने व्यक्तिलाई रु. २५ लाख दिने ।
यसैगरी करिब ४ दर्जन नेताको टाउकाको मूल्य २५ लाखभन्दा माथि तोकिएको थियो । हतियार सहित आत्मसमर्पण गर्नेलाई पनि पुरस्कारको व्यवस्था थियो ।
तत्कालिन माओवादी नेताहरुको टाउकाको मूल्य तोक्नेहरु तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री खुमबहादर खड्का र गृह राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेल हुन् । २०५४ मा तत्कालीन एमाले नेता बामदेव गौतमले पूर्वपञ्चहरुसँग मिलेर माओवादीलाई आतंककारी घोषित गरेका थिए ।
टाउकाको मूल्य तोकिएका मुख्य नेतामध्येका एक लेखनाथ न्यौपाने पनि हुन् । युवा नेता न्यौपाने दुई कार्यकाल अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै सचिवालय सदस्य भए । हाल उनी नेकपाको केन्द्रीय समितिको जिम्मेवारीमा छन् । लेखनलाई उनले नियमित धर्म बनाएका छन् ।
अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समितिले प्रकाशन गरेको न्यौपानेद्वारा लिखित ‘संघर्षको इतिहास’को कभरपेजमा अखिल (क्रान्तिकारी)को केन्द्रीय समितिले लेखेको छ– ‘सिद्धान्तलाई व्यवहारमा खोज्ने र निष्ठाको बाटो रोज्ने एक योद्धाको नाम हो, लेखनाथ न्यौपाने । राजनीति उनको मूल कर्म हो । तत्कालीन सत्ताले लेखनाथको टाउको काटेर ल्याउनेलाई २५ लाख इनाम तोकेको थियो । त्यो इनामको सिकार हुनबाट बँचेको नाफाको टाउको खियाउँदै अहिलेसम्म उनले नौ वटा कृतिहरु लेखिसकेका छन् ।’
४०२ पृष्ठको सो किताबमा न्यौपानेबारे लेखिएको छ, ‘गोल्डस्टार जुत्ता लगाएर जनयुद्ध पूरै छिचोलेका न्यौपाने अहिलेसम्म गोल्डस्टार जुत्तामै अडिएका छन् । यो उनको अलग परिचय हो । साढे चार वर्ष जेल जीवन बिताएका उनले जनताका झुपडीदेखि विश्वविद्यालयसम्मका बागी विचारहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् । सरल जीवनशैली, चट्टानी वर्गीय पक्षधरता, गहिरो राजनीतिक अध्ययन र प्रखर वक्तृत्व क्षमता उनका विशेषताहरु हुन् ।’